ကနေဒါတွင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများ အတွက် ဆန္ဒပြ ချီတက် - Yangon Media Group
ကနေဒါတွင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများ အတွက် ဆန္ဒပြ ချီတက်
ဗင်ကူဗား၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁
ကနေဒါနိုင်ငံ ဗင်ကူဗားမြို့၌ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက်က အမျိုးသမီးစုစည်းညီညွတ် ခြင်းအကျိုးပြုပါဝင်ခြင်းများအတွက် စုဝေးချီတက်ခြင်းများပြုလုပ်ကာဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြသည်ဟု ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်သတင်းများအရ သိရသည်။
”အမျိုးသမီးများအတွက် တန်းတူညီမျှခြင်းဆိုတာ အခုထိမရရှိသေးပါဘူး”ဟု တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ နာတလာလီလီးက ဆင်ဝှာသတင်းဌာနသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ယင်းနေ့ ချီတက်ပွဲတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် ကလေးများအပါအဝင် ဦးရေ ၁၅ဝဝ ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ မြောက်အမေရိကတစ်ဝန်းရှိ အမျိုးသမီးများအား လူဖြူအမျိုးသမီး လူမည်းအမျိုးသမီးများခွဲခြားခြင်းများ၊ မိန်းမမုန်းတီးရေးဝါဒီများ၊ သူစိမ်းကြောက်အမျိုးသမီးများမရှိသင့်တော့ကြောင်း ဆန့်ကျင်သူအမျိုးသမီးများက ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗင်ကူဗားမြို့ရှိ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော် သူ အင်နီအိုယာနာက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
”ဒီမှာလာစုစည်းကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမှန်တရားကိုလိုလားထုတ်ဖော်ကြတာပါ”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲ၌ပါဝင်သူ မာရီယာဗင်ဒါဇီးသည် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပွဲတော်တွင် မီးရှူးတိုင်ထွန်းညှိကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ”အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု၊ မညီမျှခွဲခြားဆက်ဆံမှုများပပျောက်ရေးအတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဆန္ဒပြသွားမည်”ဟုလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် ကဘူးလ်မြို့ ထိပ်တန်း ဟိုတယ်ကို လက်နက်ကိုင်များ တိုက်ခိုက်၊ လူ အများအပြားသေဆံ??
မြောက်ဦးဖြစ်စဉ် အပါအဝင် ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတွင် တာဝန်ရှိ၊ မှားယွင်းမှုများ ရှ??
မော်ဒန်ချစ်တီး ဇာတ်ကားမှာ Brand တွေ အရမ်းကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ??
ချဲလ်ဆီးအသင်းတွင် အိုဒွိုင်းနှင့် ရူဒီဂါတို့ ပြန်ကစားနိုင်တော့မည်
မိုးစပါးအသစ် ပေါ်ချိန်ဖြစ်သော်လည်း ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့မှု နည်းနေသည့်အတွက် ဈေးကျ ပြည်ပ အဝယ်??